Heti dzakanakisa dzembwa dzechando nezhizha | Imbwa Nyika
Nguwani dzembwa chinhu chinobatsira zvikuru mumwedzi inopisa zvikuru yegore uye munguva yechando, uye kwete chete kuchengetedza misoro yemhuka dzedu dzinovaraidza, asiwo nekuti dzinongo yevedza neimwe!
Muchinyorwa chino hatizongotaura nezve hati dzembwa maererano nebasa radzo uye mamwe matipi anobatsira ekuti tingaasarudza sei, tichaonawo zvigadzirwa zvishoma zvinoyevedza. Isu tinokurudzirawo kuti iwe uverenge ichi chimwe chinyorwa nezve zvipfeko zvembwa duku: majasi anodziya uye jumpers Kuti imbwa yako iende pamwe chete!
Frienda 2 Piece Seti ye...
Pawaboo 2 Piece Seti ye ...
Himlaya baseball Cap...
Pssopp Cap Imbwa ...
1 Ngowani yakanakisisa yembwa
1.1 Visor cap yembwa yako uye yako
1.2 Ngowani yekuzvarwa yembwa dzemhando yepamusoro
1.3 Chivharo chezhizha chine visor
1.4 Mvura isina mvura ine hooded raincoat
1.5 Crochet winter hat
1.6 Kudziya nzeve nemutsipa
1.7 Cowboy hat yembwa dzakaoma
2 Ndedzipi heti dzembwa?
3 Nzira yekusarudza heti yakanakisisa yembwa yako
4 Mazano ekujaira imbwa yako
5 Kupi kunotenga imbwa hats
Ngowani yakanakisisa yembwa
Visor cap yembwa yako uye yako
Iyi kapu yakakwira ine zvese, kunyangwe hombe replica yekufananidza imbwa yako! Pamusoro pekuwanikwa mune zvitema nebhuruu, chivharo chine masaizi akati wandei kuitira kuti igadzirise zvakanakisa musoro wembwa yako, kuti usarudze kuti ndeupi unomukodzera zvakanyanya iwe uchafanirwa kuyera chinhambwe kubva kunzeve kuenda nzeve ine tepi yekuyeresa. Iyo kepi ine maburi maviri ekuisa nzeve uye yakasununguka uye nyore kuisa uye inogadziriswa nevelcro strap kumashure uye tambo yekudhonza ine kuvhara kwepurasitiki kuchirebvu.
Kune rumwe rutivi, vamwe vashandisi vanoratidza izvozvo saizi yakaomesera imbwa hombe.
Ngowani yekuzvarwa yembwa dzemhando yepamusoro
Ngowani yekuzvarwa ye ...
Kana iwe uchida imbwa yako kupfuura chero chinhu chiri munyika ino, haugone kumira kupemberera zuva rekuzvarwa nemaitiro ese aanofanirwa, ndosaka iyi heti yakanaka yakaita sekeke yakanaka. Zvakare inosanganisirwa bandana inopedzisa ensemble. Mucheka wacho wakanyanya kupfava uye wakasungwa netambo nekuvhara kwepurasitiki inokwana pasi pechirebvu. Inowanikwa mumavara maviri, bhuruu nepingi. Sechinhu chisina kunaka, zvinoita sekunge saizi yakati tarisei uye kuti yakaoma kupfeka, kunyangwe mhedzisiro yacho haigone kuve yakashata.
Chivharo chezhizha chine visor
Una yakasununguka chivharo chezhizha chine jira rinotonhorera uye rinowanikwa mune matatu mavara (denim bhuruu, pink uye dema), hukuru hwakasiyana (kubva kuS kusvika kuL) uye yekare plastiki uye tambo yekuvhara. Iinewo maburi maviri munzeve kuitira kukwana zviri nani. Iyi modhi inomira zvakanyanya kune jira rayo, iro sezvatakataura rakanyanya kutsva, pamwe nekureruka, kufema uye kunwa hunyoro, zvichiita kuti ive yakakwana muzhizha.
Mvura isina mvura ine hooded raincoat
Kazhinji, zvivharo zvisina mvura zvinowanzowedzerwa kune raincoat, sezvo, kuitira kudzivirira imbwa yedu kubva mumvura, zviri nani kana tikavhara muviri wose. Neiyi modhi unogona kuipfekedza zviri nyore kwazvo (ine velcro kuvharwa), mukuwedzera, ine akati wandei maburi ehuni, tambo ... saka mhuka ichave yakasununguka uye yakadzivirirwa zvachose kubva pakunaya. Tsanangudzo senge iyo yemukati inogadzirwa nemhepo inofema mesh, iyo inoratidzira mitsetse uye yakagadzika homwe diki yekuchengetera mibairo kana chero chinhu chinoita kuti iyi modhi ive imwe yeakanakisa raincoats yemhuka dzinovaraidza.
Chenjera, nekuti kana ukaona imbwa yako yakapfeka ngowani yakanaka iyi, ine muchekechera nezvimwe zvese, ungangove nekurwiswa kwerudo. Inowanikwa muhukuru hwakati wandei uye mavara (zvese ane Kisimusi inonaka, ingave yekufemerwa naSanta Claus kana maelves ake), imhando inodziya kwazvo. neburi kumeso uye rimwe pamutsipa. Mukuwedzera, inosvika zvishoma, iyo inoshandawo sechirafu. Izvo chete asi ndezvekuti haina maburi enzeve.
Kudziya nzeve nemutsipa
Chapel yeImbwa Hoodie ...
Chigadzirwa chinoda kuziva chine chekuita neheti dzembwa ndeve nemutsipa zvinodziya seizvi. Vanoshanda senge panty yekare iyo vanhu vanoenda nayo kumakomo: zvichienderana nemapfekero atinoita, tinogona kuvhara mutsipa kana nzeve. Nezvekupedzisira, kuwedzera, iyo imbwa ichanzwa yakaderera, saka inogona kushandiswa mumamiriro ezvinhu anonetsa kumhuka, semadutu, mitambo ... pasina mubvunzo chigadzirwa chinonakidza zvikuru chatinogonawo kudzivirira ringleader munguva yechando.
Cowboy hat yembwa dzakaoma
Cowboy hat ye ...
Hatina kuda kupera ndisina kukurumbidzai imwe yeheti yembwa isinga shande (haidzivirire kubva kuchando kana kupisa) asi yakanyanya kunaka Zvatingawana: ngowani yemombe iyi, ine muromo wakafara uye tambo yayo, yakagadzirwa nemaoko uye ine jira rakanaka kwazvo. Zvichaita senge chipfuyo chako chabva kuDallas!
Ndedzipi heti dzembwa?
Ngowani yembwa haingoshandire kuchengeta chipfuyo chako chiri mufashoni yazvino kana kuti ive yakanyanya kunaka mupaki, ivo vanewo mabasa mazhinji, kunyanya ayo ane chekuita nekudzivirira kubva kune meteorological phenomena.
Kutanga, heti dzinomiririra dziviriro huru pakutonhora, kunyanya kana dzakagadzirwa nemvere dzemakwai. Yeuka kuti kana iwe uchigara mune imwe nzvimbo yakanyanyisa kana yakadzikama hazvidikanwi kuisa ngowani pairi, zvisinei, mumhepo yakadzika kwazvo, kana nekuvapo kwechando, ngowani ichabatsira kuchengeta imbwa yako ichidziya. Sekutaura kwaambuya, kuti udziye makumbo nemusoro kuti udziye dzihwa!
Chechipiri, heti dzinobatsira zvikuru mumamiriro ekupisa, kunyange munyaya iyi zvingava zviri nani kuvadana zvivharo, sezvo kuti vakwanise kuzadzisa basa ravo nemazvo vanofanira kuva nevisor. Nokudaro, kwete musoro wembwa chete unodzivirirwa kubva kune zuva uye kupisa, asiwo maziso, sezvo, sevanhu, chivharo chinodzivirira mazai eUVA.
Kugumisira asi kusiri kupedzisira, zvivharo zvisingapindi mvura neheti ipfungwa huru yekuti paunotora imbwa yako kunze kune zuva rekunaya, sezvo nekuda kwebapiro (kunyanya kana vari mubati wehove) mvura haingapindi mumaziso ako, izvo zvichaita kuti unzwe wakasununguka.
Nzira yekusarudza heti yakanakisisa yembwa yako
Kusarudza ngowani kunogona kunetsa (ndine hurombo, iyo pun haidzivisiki), ndosaka mazano aya anogona kubatsira:
Sarudza saizi zvakanaka. Zvakanaka, chinhu chakakosha, asi zviri nyore kuti nekunakidzwa kwekutenga tiara itsva yeCujo unokanganwa kuyera musoro wake kuitira kuti ikwane zvakanaka uye irege kudonha kana kumusvina. Tarisa nemuenzaniso wega wega, sezvo zviyero zvingasiyana.
Funga pamusoro pezvauchazvishandisira. Haungade imwe mhando yengowani kana kuchinaya, kuti kana kuchitonhora kunge kune zuva rakanyanya. Sezvatataura pamusoro apa, kune kutonhora hakuna chinhu chakafanana neheti yemvere dzemakwai kana zvimwe zvinhu zvinodziya; nokuda kwezuva, chivharo chine visor uye jira rinofema, uye nokuda kwemvura, ngowani yemubati wehove kana ine visor yakagadzirwa nemucheka usingapindi mvura.
Bet pakunyaradza kwembwa yako. Nokuda kweizvi, hazvikurudzirwi chete kuti utarise zvakanyanya pakukura, asiwo kune zvimwe zvinhu, semuenzaniso, kana jira rakagadzirwa nechinhu chinopisa kana kuvhara, iyo inogona kuva rubber strip inovhara pasi pechirebvu, velcro, kana tambo ine kuvhara kwepurasitiki. Hats dzine maburi nzeve dzinokurudzirwawo zvakanyanya, sezvo dzakagadzikana uye dzakasununguka.
Mazano ekujaira imbwa yako
Dzimwe imbwa dzinobvuma marudzi ese ezvishandiso uye zvinotoita sekunge iwo masikirwo emhando, zvisinei, mamwe Zvakaoma kugamuchira chinhu chavanoona kunze kwenyika. Kuti vajairirwe:
Ita shuwa kuti saizi ndiyo chaiyo kuitira kuti ngowani igare yakasununguka sezvinobvira. Iyo yakanyanya kugadzikana iyo (pasina kuomesa, hongu), zviri nani ivo vachaitsigira.
Rega kekutanga, usati wapfeka, nhuhwidza uye ongorora kuti ujairane.
Isa pane zvimwe maminetsi mashoma zuva rega rega kuti ujairane nazvo.
Kana pakupedzisira pasina nzira, usamanikidze. Kana iwe uine hanya nezuva, unogona kusarudza zvimwe zvinhu (zvakadai semagirazi embwa) kana kunyange sunscreen yemhuka dzinovaraidza. Iwe unogona zvakare kuedza kudzivirira maawa ekupisa zvakanyanya, kutonhora kana kunaya kwakanyanya.
Kupi kunotenga imbwa hats
Kune matani enzvimbo dzakasiyana kwaunogona kutenga hati dzembwa, mubatsiri uyo, nekuda kwekugadzirwa kwayo nyore, ane zvakawanda zvakasiyana-siyana zvakasiyana-siyana, izvo zvinonyanya kunaka. Semuyenzaniso:
En AmazonSezvawaona mukusarudzwa kwezvigadzirwa zvatakakurudzira pamusoro, vane mhando dzekumisa mota nhatu, zvese zviri nyore kucheka uye zvakanyanya kuoma uye zvakaomarara. Mukuwedzera, kana iwe waita chibvumirano chePrime sarudzo, iwe unayo kumba pasina.
En mashopu anehunyanzvi saTiendaAnimal kana Kiwoko vanewo heti shoma dzembwa. Chinhu chinonakidza nezvesarudzo idzi ndechekuti, uine zvitoro zvenyama, unogona kuvashanyira kuti uone kana saizi uye modhi inokodzera izvo iwe uye chipfuyo chako chaunoda.
Chekupedzisira, usatonge dzimwe sarudzo dzinotonhorera, semuenzaniso, kune akawanda mapeji ewebhu uye maprofile pane portals senge. Etsy kwavanotengesera heti dzakagadzirwa nemaoko. Pasina kupokana, ndiyo imwe yedzakanakisa sarudzo kana iwe uchida kuti ngowani yako yemhuka ive yepakutanga uye yakasarudzika.
Tinovimba kuti takakubatsira iwe kuwana, pakati peiyi murwi weheti dzembwa, iyo inonyatsokodzera iwe uye chipfuyo chako. Tiudze, wakambopfeka ngowani here? Une muenzaniso waunofarira here? Zvakatora zvakawanda kuti zvijaire here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa zvishongedzo » Imbwa dzakanakisa heti dzechando nezhizha